[TUTORIAL] Indlela Yokuthatha I-Perfect Selfie (Amathiphu we-7) - Khetha Okuphephile
[TUTORIAL] Indlela Yokuthatha I-Perfect Selfie (Amathiphu we-7)
Bruno Esteves 2017-11-12T17:16:09+00:00
Indlela yokudweba i-selfie.
Namuhla kubalulekile kubantu abaningi ukungathathi selfie.
Njengoba ubuchwepheshe buqhamuka amafoni omakhalekhukhwini aqala ukuguquka futhi baqala ukuba nekhamera ngemuva.
Kamuva, kokubili nangaphambili kwefoni kwakunekhamera, okwenze kube lula ukuthatha izithombe, nakuba ikhwalithi yayingeyona engcono kakhulu.
Kodwa emva kweminyaka embalwa inkathi ye Smartphones (Smart Smartphones) eguqulela indawo yeselula.
Namuhla sinawo ama-smartphones anekhamera ezinhle kakhulu ukuze sikwazi ukuthatha selfies futhi sibonise kubangane bethu, umndeni, njll.
Ake sithathe amathiphu ambalwa ukuthola i-selfie enhle:
1 - Ukuhlanza ikhamera
Kungase kubonakale kuvelele kakhulu kodwa okuqinisekile ukuthi ngesikhathi sokuthatha selfie sihlale sivame ukukhohlwa ukuhlanza ikhamera.
Khona-ke i-selfie ibonakala iyincithakalo encane ngenxa yokungcola okungase kube nakho.
Vele uhlanzeke ngezinto esizitholile esitheni noma ngisho ne-sweater yethu ukuze silungele ukuthatha u-selfie oyifunayo.
I-2 - Ukukhanyisa
Into yokuqala okufanele iyenze futhi njalo ebaluleke kakhulu ukukhanya.
Hlela njalo ukuthi ubuso bakho bubheke ukuze ukwazi ukuthola isithombe esihle sobuso bakho.
Isixazululo esihle sizoba yisibonelo, ukukhanya kwesibani esiphambi kwayo akuveli ngemuva ukuthi kuzoba mnyama kakhulu futhi kuzophela ukuchitha isithombe.
Ngelanga ngokuvamile kuvunyelwe ukuthatha le selfie noma ekuseni noma ntambama.
Lokhu kungenxa yokuthi ngaleso sikhathi kuzokwenza ukuthi kube nemithunzi encane ebusweni, okuzosiza u-selfie ukuba athole kangcono kakhulu.
Ukugwema ilanga phakathi nosuku ngokukhanya okungaka futhi ngisho nakakhulu phezulu kuphelela ukwenza ukukhanya okukhulu okungakuvumeli ukuthi uthole selfie ezimweni.
Indlela yokudweba i-selfie
I-3 - Focus
Okubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukuthatha nini selfie ukwazi ukuthi uzogxila kanjani ukuze isithombe sibukhali futhi sihle.
Gxila endaweni lapho ubukeka ubukhali khona.
Uma ungenzi lokhu uzophindaphinda kaningi uze uthole ezinye ezihloniphekile.
I-4 - Ingemuva
Enye iphuzu ukwazi ukuthi yini ofuna ukuyenza ngemuva uma ufuna ukuba nje ubhekene nobuso futhi ufuna ukubonisa into yesibili njengendawo yokuma.
Noma uma kuhloswe ukuba nguwe nje, kuleso simo unakekele okukuse ngemuva kwakho ukuze ungakuphangi we-selfie ye-protagonism.
I-5 - Ubuso
Ukwazi ingxenye engcono kakhulu ebusweni ukuze afinyelele selfie engcono kakhulu, sonke sinesabelo esiyintandokazi ngokuqondene nobuso bethu.
Kwabanye kungenzeka kube yingxenye efanele yobuso obucabanga ukuthi bukhulu kakhulu futhi buhle, abanye abantu baphambene.
Into ebaluleke kakhulu ukuthatha isithombe ngaso sonke isikhathi ngengalo iswetshiwe futhi iphakanyiswe kancane ukuze igweme ukubonisa izingxenye ezingathandeki ezincane njengezikhumba ngokweqile isibonelo.
I-6 - Izithombe
Ungathathi isithombe esisodwa ngoba usengozini yokungabi nesithombe ngendlela oyithandayo, ngaso sonke isikhathi uthatha izithombe eziningana ngokulandelana, ngakho-ke unezinketho eziningi futhi ukhethe ukuthi ubani oyithandayo kakhulu.
7 - Izinhlelo zokuhlela isithombe
Ngemuva kokuthatha u-selfie futhi ngaso sonke isikhathi kuhle ukuhlela ukuhlelwa kwesithombe ngendlela yokwenza kube mnandi kakhulu ku-selfie. Kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezifana ne-VSCO noma Izinhlobonhlobo.
Ngezinye izikhathi amasu alula angavumela izithombe zethu zibe nekhwalithi engcono yezithombe, futhi yiziphi izintshuzu ongazeluleka ukuthola selfie ephelele?